UK oo qaraar ku saabsan ciidamada DF u gudbisey golaha ammaanka QM - Caasimada Online
Home Warar UK oo qaraar ku saabsan ciidamada DF u gudbisey golaha ammaanka QM
UK oo qaraar ku saabsan ciidamada DF u gudbisey golaha ammaanka QM
New York (Caasimada Oline) – 12-kii November dowladda Britain ayaa qaraar ay u gudbisay QM waxa ay walac kaga muujisay xaaladda ciidamada dowladda Soomaaliya iyo musuq-maasuqa xooggan oo ay ku tuhmeyso, Caasimada Online ayaa sidaas ogaatay.
Qaraarkan ayaa London waxay walaac kaga muujisay in hubka iyo rasaasta ciidamada dowladda Soomaaliya loo maamulo si xun, oo ay iibsadaan ciidamada. Waxaa sidaas oo kale lagu sheegay wabixintii kooxda QM ee Soomaaliya.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegay in Britain ay qaraarkan ku dalbatay in mushahar la siiyo ciidamada Soomaaliya, si aysan hubka u iibsan oo ay diyaar ugu noqdaan inay ammaanka dalka kala wareegaan Amisom.
Amisom ayaa la qorsheynayaa inay dalka ka baxaan ugu dambeyn sanadka 2021, waxaana Britain ay rumeysan tahay inaysan ciidamada Soomaaliya xaaladdan kula wareegi karin amniga.
Madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa labaduba sheegay in haddii Amisom baxeyso ay diyaar u yihiin in si iskood ah ay ciidamadooda ugu sii hayaan Soomaaliya, balse waxay dalbanayaan lacag aad u badan.
Si kastaba Britain ayaa qabta in lacagta ay dalbanayaan Burundi iyo Amisom lagu dhiso oo mushahar loogu dhigo ciidamada Amisom. Lama yaqaan goorta ay golaha ammaanka QM ka doodi doonaan qaraarkan.